2. Foreigner (Application Form) | Consulate-General of the Republic of the Union of Myanmar, Los Angeles, U.S.A
Home » Data » 2. Foreigner (Application Form)
Requirement: Foreigner’s Dependent PPT Renewal Form
(ဃ) နိုင်ငံခြားသားအား မှီခိုသူ သားသမီးနှင့် မိဘများ လျှောက်ထားရန် ညွှန်ကြားချက်
နိုင်ငံခြားသားအား မှီခိုသူ သားသမီးနှင့် မိဘများဟု ဆိုရာတွင် အတူနေ သား(အသက်၂၁နှစ် နှင့်အောက်)၊ သမီး (အသက်၂၅နှစ် နှင့်အောက်)၊ အတူနေ မိဘများ (အသက်၆၀နှင့်အထက်)ကို သတ်မှတ်ပါသည်။
– ထိုးမြဲလက်မှတ်(လျှောက်ထားသူမှ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ ပူးတွဲတင်ပြရမည့် သတ်မှတ်ထားသော ပုံစံတွင် ထိုးမြဲလက်မှတ်အား ရေးထိုးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။)
– အ‌မေရိကန်နိုင်ငံတွင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ကတ်ပြားရောင်စုံမိတ္တူ၊ သို့မဟုတ်၊ နေထိုင်ခွင့် ဗီဇာ အ‌ထောက် အထား
– မှီခိုခံရ‌သော နိုင်ငံခြားသား၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်မိတ္တူ၊ သို့မဟုတ်၊ နိုင်ငံသား ခံယူထားသည့် လက်မှတ်မိတ္တူနှင့် ၎င်းမှ မှီခိုသူ မိသားစုဝင်အား အ‌မေရိကန်နိုင်ငံ၌ ရောက်ရှိစဉ်အတွင်း နေထိုင်စားသောက်စရိတ်များအား တာဝန်ယူကြောင်းစာ (ယင်းစာအား နိုထရီပြုလုပ်၍ တင်ပြရန် )
– မှီခိုခံရ‌သော နိုင်ငံခြားသား၏ မိသားစုဝင်ဖြစ်ကြောင်း အ‌ထောက်အထား (လက်ထပ်စာချုပ်၊ မွေးစာရင်း၊ အိမ်ထောင်စုစာရင်း)
Download > 2. Foreigner (Application Form)